Vagadziri uye Injiniya Vati Tiri Kupesana neSapanca Teleferic Project - RayHaber
mushaTURKEYDunhu reMarmara54 SakaryaVagadziri uye Injiniya Vanoti Tiri Kupesana neSapanca Teleferic Project
Vagadziri uye Injiniya Vanoti Tiri Kupesana neSapanca Teleferic Project
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, GENERAL, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY, TELPHER 0
Vamiriri vemakamuri einjiniya nevagadziri muSakarya vakasangana nemumiriri wekambani iyi vachiita chirongwa cheRopeway muSapanca
Iyo ropeway chirongwa muKırkpınar Neighborhood, iyo yaishandiswa muSapanca Municipality munguva yapfuura yekutonga nguva, yave pane yeruzhinji kwenguva yakati. Bursa Teleferik AŞ, uyo akahwina thenda, akasangana nekuita kwevanhu ve mudunhu pamwe nemasangano asiri ehurumende vasati vatanga basa iri.
Salim Aydın, Sakarya Mumiriri weProvince weChamber of Mechanical Injiniya akabatana neTMMOB (Union of Chambers of Turkish Injiniya uye Architects), Hüsnü Gürpınar, Mutungamiri weSakarya Bazi reChamber of Civil Injiniya, Sami Kafadar, Sakarya Mumiriri weProvince yeChamber of Guta rechitima cheGearrde. ari Mandacı; Akave nemusangano naBurhan Özgümüş kubva kuBursa Teleferik A.Ş.
Mushure mekukumbira kwefemu, Burhan Özgümüş, mukuru wekambani, akatanga kutaura pamusangano wakaitwa pamumiriri wedunhu weChamber of Mechanical Injiniya.
Özgümüş akatsanangura zvakadzama nezveiitirwo yekutengesa kusvika parizvino, uye akataura kuti 80% yemabhadharo akaitwa kuSapanca Municipality akaitwa.
Pasina kuona iyo nzvimbo
Özgümüş akataura kuti vakasaina gwaro rekusvitsa vasina kuona nzvimbo, asi vakatadza kutanga basa; Chikonzero cheichi ndechekuti Meya mutsva anotarisirwa kutora chigaro chekanzuru, akadaro.
Mumiriri weChamber of Mechanical Injiniya mudunhu reSarim, Kartepe neSapanca Kırkpınar auction akabvunza huwandu hwemakambani ari kutora chikamu muchiitiko ichi.
Vakuru vekambani, uyu mubvunzo; panguva ino, 2 inguva yemwedzi uye faira nyowani, nhamba yemafemu 4, huwandu hwemakambani akapinda munyoro 1, iyo ivo pachavo vakapindura vachitaura.
TINOGONA PAKUTI PENYAYA IYI
Chikamu cheMishini Maenjineri Inomiririra Provincial mumiriri, musangano unotevera ruzivo nezvekuenderera mberi kwemusangano wakapihwa:
Teknik Kwakataurwa zvounyanzvi kuti sarudzo yenzvimbo yeprojekiti iyi yakanga isiriyo. Kana vakumbirwa, zvinonzi vanozopa rutsigiro rwazara kuzvidzidzo zvitsva zvepurojekiti nekusarudza imwe nzvimbo inobatsira vanhu neguta pasina kukuvadza chiyero chezvemamiriro ekunze. Union of Chambers yeTurkey Architects uye MaNjiniya Sezvo zvikamu zveSakarya, zvinopesana nenyika yazvino yeprojekiti. kontrakita akaziviswa nezve kutsunga kwavo uye akavatenda nemusangano. ”(Sakarya Yenihaber)
Architects uye Engineers Group vakataura nezve Kadıköy-Kartal metro! 19 / 08 / 2012 Kunyange zvazvo takaita nyika rechipiri dangwe Metro njanji enyika munyika yedu zvinosuruvarisa rakachengetedzwa vangosiyiwa kwenguva refu kusvikira gore xnumx'l xnumx'l kwegore. In pengarava kumusoro munyika dzakabudirira metropolises maitiro Istanbul asi kuti vanyatsokwanisa uye kugadzirisa zviri kusangana pamusoro mabhazi, rakanga, nguva dzose guta Pavasinganyatsozivi Istanbul Vaifunga .. Last 1940 makore, mabhazi, kunyanya kuwedzera pamwe kukura pevhu uye chiedza njanji chirongwa, kusimbiswa kwemasitadhi ezvitima kunofungidzirwa, asi patinofunga nezvekukura kwemaitiro, zvinoonekwa kuti zvidzidzo hazvina kukwana. Zvitima zvemasitadhi uye metro zvakakosha nokuda kwehupfumi, yakachengeteka, nokukurumidza uye inofadza kutakura sistem
Nhasi muNhoroondo: 11 February 1888 Kuvakwa kweSirkeci Chitima chakatanga. Architect Prussian Ogust Yasmund ... 11 / 02 / 2015 Nhasi muNhau dzeChishanu 11 Nechido che 1878 chegore raFebruary, kubvumirwa kwekambani yeRumeli yekufambisa inharaunda kuAustralia nyika yakagamuchirwa. Zita rekambani iyi raiva East Railways Business Company. 11 February 1888 Kuvakwa kweSirkeci Station yakatanga. Chivako, chakagadzirirwa nemuumbi wePrussian Ogust Yasmund, chakatumirwa ku3 November 1890.
Architect yaida Sinan Mosque 500 gore-based cement Marmaray 110 yakagutsikana negore 06 / 06 / 2013 Gurukota Guru Tayyip Erdoğan vakabvunza Ahmet Eren, Sachigaro weCement Industry Employers 'Union uye Eren Holding Bhuku reVatungamiri Sachigaro pamusangano weBitlis, makore 500 apfuura. inosvika makore mangani? - 110 ine nhoroondo yegore negore. - Kunyange panguva iyoyo, zvivakwa zve2 zvemakore zvakaiswa kunze. Sei iwe usingakwanisi kuisa cementers kupfuura 500-500 makore? Ahmet Eren, nhaurirano iri pakati Prime Minister akati Turkey Cement Manufacturers Association (TCMA) President Automotive uye Oyak Cement Group mumusangano, mutevedzeri wapurezidhendi TÇMB ...
Kubata mifananidzo paMimar Sinan Bridge 30 / 04 / 2014 Kuchengetedzwa kwekufananidzira kweMimar Sinan Bridge: Imwe yemabhiriji makuru akafamba akavakwa neKocaeli Metropolitan Municipality paD-100 Highway, Mimar Sinan Bridge pamberi peYeni Cuma Mosque iri kuvezwa. Kudenga kunotarisirwa kuti kupedze mumwedzi inenge ye6. CLEANLENİP, PAINTING Imwe yemabhiriji makuru ekufamba akavakwa neMetropolitan kuMugwagwa weD-100 Highway, mumwe wei giant Sinan Bridge vavakadzi veSinan Bridge 3 pendipi yekutengesa yakaitwa munenge mwedzi yapfuura. Iyo kambani yakatanga bridge rekugadzira purogiramu nekutanga kwemwedzi yezhizha. Painting nemakorani anokosha uye vashandi veC4 inotarisirwa kuzadziswa mumwedzi we7. Vakuru vakuru vekambani vakati kana mamiriro ekunze akafamba zvakanaka, nguva iyi ingadai iri daha
Kana iyo yakakura yeMimar Sinan Bridge inogona kufamba 03 / 06 / 2014 Kana zvikwata zveMimar Sinan Bridge zvinogonawo kufamba: D-100 Mugwagwa Pane zvakawanda zvevanhu mumigwagwa yevatambi vanofamba paImitmit inopinda. Zvisinei, vatengesi veMimar Sinan Bridge, kunyanya pamberi peYenicuma Mosque, vanowanzoremara. Apo masitepisi aya asingafambi, kunyanya kune vakwegura, kuyambuka bhiriji rekufamba kunewo zvinotyisa zvikuru. Escalators inoda kuongororwa kakawanda kana ikashanda, uye kana ikakundikana, inoda kupindira nekukurumidza.
Graffiti Kuchenesa paMarmaray Sets
Architects uye Engineers Group vakataura nezve Kadıköy-Kartal metro!
Nhasi muNhoroondo: 11 February 1888 Kuvakwa kweSirkeci Chitima chakatanga. Architect Prussian Ogust Yasmund ...
Architect yaida Sinan Mosque 500 gore-based cement Marmaray 110 yakagutsikana negore
Kubata mifananidzo paMimar Sinan Bridge
Kana iyo yakakura yeMimar Sinan Bridge inogona kufamba
The elevator inoshanda paMimar Sinan Yaya Bridge
Zvinopesana Zvichibva Kubato reInjiniya Bursa Branch Yekutakura Purogiramu Uye T-1
Gebzeli Engineer akatarisa Gulf Bridge muImit
Gebze Engineers 3. Bridge Review
Turkish Engineers Akagadzirwa Mutunhu Wematunhu uye National Tram